အမေ့ထက်ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ အဖေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေရှိလား? ~ The ICT.com.mm Blog
အမေ့ထက်ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ အဖေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေရှိလား?
ဒါဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ရှားပါးကံကောင်းလူသားပါနော်။ အချက်အပြုတ်ကောင်းတဲ့အဖေ့ကို မပင်ပန်းရလေအောင် မီးဖိုချောင်သုံး #Cooking #Baking Items လေးတွေ ဝယ်ပေးပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စားစရာလေးတွေကို ပူဆာလိုက်ပါ။ Promo ရှိလို့ ဈေးကလည်း သက်သက်သာသာနဲ့ ရဦးမှာနော်။
ဖေဖေ့အတွက် Kitchen လေးတခုစီစဉ်ပေးလိုက်ကျရအောင် https://loom.ly/ivmviGE
ဒါတင်မကသေးဘူးနော် နောက်ထက် 70% အထိဈေးလျော့ ထားတဲ့ Electronics and tech gadgets များစွာ ရှိသေးလို့ အပြေးလေးအော်ဒါမှာလိုက်တော့နော်။
For More » https://loom.ly/AIuhFkk
Why shop with ICT.com.mm
» 1 discount point for every 1 Kyat spend
» Pay with debit, credit card or bank transfer
» 100% guarantee and after-sales service
» Speedy delivery in Yangon & around Myanmar
»9AM – 12 AM around the clock live chat
» Price match guarantee from authorized distributors
Live Chat with us: https://loom.ly/iAHvcug
Openachat with us: https://loom.ly/nXWjXDY
0976 544 1707
0976 544 1708
0976 544 1709
0976 544 1710
#ShopICT #Myanmar #1OnlineTechRetailer
Newer ခန့်ခန့်ကြီးနဲ့ သန့်သန့်ကြီးနေတတ်တဲ့ အဖေ့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးလက်ဆောင်လေး
Older See it all on one screen!